GYNOSTEMMA SHAN-CALEEN AH: GURYO WAXTAR LEH IYO BEERASHADA, HALABUURKA KIIMIKADA IYO CODSIGA DAAWADA, BEERASHADA IYO DARYEELIDDA WARSHAD DHUL FURAN - SOOSAARKA DALAGGA
Ginostemma shan-caleemo leh: guryaha oo faa'iido leh iyo koritaanka guriga
Aynu ogaanno warshad khaas ah oo qof walba uu ku kobcin karo goobtiisa ama beerta hore. Waxay ku saabsan tahay gynostemma ee shan-caleen, dhaqanka Shiinaha, taas oo loo aanaynayo sifooyinka noolaha qofka oo sannadkii 1991 lagu diiwaangeliyey shirkii Beijing ee tobankii tobnaad ee tufaaxa. Waxaan kuu sheegi doonnaa sida iyo sababta ay u koraan warshadkan, sida loo soo gooyo alaabta ceeriin iyo daawada shaaha miraha ah.
Guinosthem shan-caleen weli wuu leeyahay magacyo badan: geedo aan dhiman, ginseng jaban, jiaoguluul. Tani waa warshad geedka canabka ah oo dhirta leh oo ka tirsan jinsiga isla markaana qoyska Pumpkin. Hooyadiis waa China. Caleemaha gynostemma waa dhuuban, oo leh dufan la jarjaray dhamaadka. Waxay gaari kartaa dhererka 8-9 m.
Wuxuu ka tagaa petiolate, palmate, adag. In dhererka gaari 8 cm, width - 3 cm. Kori on petioles dheer. Laga soo bilaabo shan ilaa sagaal caleemo lanceolate cidhifyo jugged. Xilliga diiran, waxay ku rinji yihiin midab cagaaran oo dhalaalaya, xilliga dayrta - casaan.
Ubaxku wuxuu dhacaa bilaha 7aad iyo 8aad. Ubaxyo yaryar oo midab cad iyo midab cagaaran ayaa lagu ururiyaa inflorescences qaabka racemes, oo gaadhaya dherer ah 15 cm.
Ka dib markii miraha ubax la sameeyay. Kuwani waa kuwo yaryar, 0.8 cm dhexroor, miro madow oo leh laba ama saddex miraha dhexda.
In muuqaalka, gynostemma qosol badan canab duurjoog ah.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan beerista ubaxa (duurjoogta) canab.
Gynostemma ayaa ku baahsan Shiinaha, Hindiya, Malaysia, Vietnam, Korea, Japan, Bangladesh, Sri Lanka iyo dalalka kale ee Aasiya. Waxay ku koraan kaymaha, oo ka mid ah kooxo duurka ah, wadada dhinaceeda, marmarna laga helay buuraha oo ah meel sare oo ah 3,000 m oo ka sarreysa heerka badda.
Gynostemma ku beeray dhul furan sida daboolka dhulka iyo daboolida dusha sare ee geedka. Guriga, waxay sidoo kale lagu beeray dhar sida dhaqdhaqaaqa barafka, halka caleemaha ay hoos u dhacayaan. By habka, marka gynostemma loo soo bandhigay Yurubiyaanka, markii ugu horeysay waxay u isticmaashay oo kaliya sida dhaqanka qolka iyo kaliya ka dib markii qaar ka mid ah loo wareejiyo sariiro ubax ee beeraha.
Dhirta Ampiel waa wakiilada madaxtooyada ee flora, iyada oo la laalaabayo caleemaha iyo fuulitaanka afkoda kaas oo u muuqda kuwo aad u fiican oo lagu dabbaalan karo dheryaha iyo joodariyeyaasha. Kuwani waa verbena, lobelia, fuchsia, pelargonium, dichondra, petunia.
Guryaha bogsoon ee qaybaha anteenada ee dhirta waxaa lagu sharaxay nuxurka qani ku ah walxaha faa'iido leh. Dhakhaatiirtu waxay si fiican u bartay. Caleemaha, kuwaas oo inta badan loo isticmaalo in lagu abuuro daawooyin, ayaa jira:
Sidoo kale fitamiinada:
Qaybta kiimikaad ee geedka canabka ah waa wax la mid ah ginseng, laakiin dambe wuxuu ka kooban yahay saponins ka yar. Marka la barbardhigo, waxaa jira ilaa 80 nooc oo ah gynostemma iyo 26 ginseng.
Kuwa soo socda waxaa loo aaneynayaa ginostemme. bogsashada guryaha:
hoos u dhigista sonkorta;
dib u nooleynta;
Ma taqaanaa? Dusha sare ee shaahyada ugu qaalisan adduunka waxaa ka mid ah cabitaanka ginseng loo yaqaan Tienchi ("Tiens"). Waxay iibisaa $ 17 halkii 100 garaam. Waxaa la aaminsan yahay in ay aad u faa'iido u leedahay jirka bini-aadamka. Si aad u cabto xitaa waxtar badan, waxaa jira gynostemma caleemo for.
Dalka Shiinaha, halkaas oo dawada dhaqameedku wali ku kalsoon tahay kalsoonidii, gynostemma waxaa loo isticmaalay sidii xarun dawo ilaa qarnigii saddex iyo tobnaad. Jacaylka Shiinaha wuxuu soo saaraa shaaha caleenta caleemaha wuxuuna aaminsan yahay in uu yahay qofka keena waqti dheer. Habkan dhaqameed ee daawada Shiinaha waxaa lagula talinayaa in lagu muujiyo walbahaarka jirka iyo dareenka. Maanta, cawska waxaa lagu daraa dheellitooyin badan oo nafaqo ah iyo shaah bir ah. Intaa waxaa dheer, dhirta waxay ka caawisaa in laga takhaluso cudurada kala duwan, jirka u keen jilitaanka, nasteexo habdhiska dareemayaasha, u jeedi ka hortagga geedi socodka gabowga, hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka, jidhka nadiifiya, iyo abuurida kulaylka oogada.
Marka la eego saameynta faa'iido leh ee dhirta dheef-shiidid, difaaca, dareemayaasha, wadnaha iyo taranka.
Waxaa ka mid ah kuwa jecel daawada bariga, cuntada dheeraadka ah ee ashwagandha waa caan u ah xoojinta nidaamka dareemayaasha, wadnaha iyo qalabka guud ee jidhka.
Isticmaalidda muddada-dheer ee alaabada ginostemma oo qayb ka ah daaweynta adag waxay u oggolaaneysaa in la hagaajiyo xaalada bukaanka inta lagu jiro cudurrada noocaas ah:
sonkorta sababta oo ah waxay leedahay saamaynta hoos u dhigidda sonkorta dhiigga;
dhiig-karka, sababtuna tahay awoodda lagu sugayo cadaadiska dhiigga;
buurnaanta, sida kor u qaadida geedi socodka dheef-shiid kiimikaadka iyo caadada miisaanka;
atherosclerosis, maxaa yeelay waxay ka qaadaysaa kolestaroolka waxyeelada dhiigga.
Ginosthemma sidoo kale waxaa loo isticmaalaa sida ka hortagga:
burooyinka malawadka ah;
Daaweynta shaaha waxtarka leh ee dadku waxay ku talinayaan in ay khamri cabaan si ay u kordhiyaan firfircoonida jidhka iyo dulqaad, dadka shaqadoodu la xiriirto shaqada maskaxda, ama kuwa ku hawlan culeyska jidhka culus.
Ma taqaanaa? Marka lagu daro shaaha digaaga, ee cuisine ee Asia, caleemaha ginostemma waxaa sidoo kale loo isticmaalaa macaan iyo dhadhanka cuntooyinka kala duwan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku saabsan dhaqankan ayaa sharxaya tayada nafaqada iyo isticmaalka haddii ay dhacdo gaajo ama cunto yaraan. Waxay dib ugu noqdaan 1406 waxayna ku jiraan daweynta Shiinaha "Gargaar caafimaad oo loogu talogalay daal."
Waayo karinta hal koob oo cabitaan caafimaad leh Waxaad u baahan doontaa laba ama saddex malqacadood oo yar yar oo caleemo cusub ah, ama hal ama laba malqacadood oo caleemo qallalan. Waxay u baahan yihiin in lagu daadiyo 250 ml oo biyo nadiifa ah oo la qaboojiyey daqiiqad (marka biyaha boodaya badeecooyin badan oo qiimo leh ayaa daadi doona) diyaariyey biyo nadiif ah. Shaaha ayaa diyaar u ah inuu cuno shan daqiiqo ka dib. Waxay leedahay dhadhan macaan leh qadhaadh yar.
Caleemaha isku mid ah ayaa la dhigi karaa laba jeer oo kale. Si kastaba ha ahaatee, ilaalinta cabitaanka ma aha maadi. Wixii saameyn daweyn ah, waa in la wada baabbi'iyaa dareen cusub.
Laguma talinayo in aad cabto cabitaan kulul ka dib afar fiidkii, haddii kale way adkaan doontaa in la seexdo. Maalin kasta waxaad isticmaali kartaa ilaa hal litir oo shaah ah. Waa in la sakhraamo ka dib cuntada.
Shaahda maalinlaha ah ayaa lagu muujiyaa dadka qaba daal joogta ah, si dhakhso ah u daalaan, dhib ku haya hurdo, oo ku nool diiqada. Ka hor intaanad cabin maalin kasta cudur kasta oo culus, waxaad u baahan doontaa inaad la tashato dhakhtar. Waa inuu yahay rinjiga habka iyo qiyaasta.
Shaaha laga helo ginostemma waa ka hortaga hooyooyinka uurka leh, hooyooyinka nuujinaya, caruurta da'doodu tahay ilaa saddex sano, iyo dadka leh shuruudaha xayawaanka shakhsi ahaaneed.
Sidoo kale akhri faa'iidooyinka iyo sifooyinka cabbitaanka shaaha leh sausep.
Koraaya gynostemma shan-leaved
Goobta furan, dhaqanka qalaad waxaa lagu beeray geedo. Seeds waxaa lagu iibiyaa dukaamo khaas ah.
Seeds waxay u baahan tahay diyaarinta - u qulqulaya maalin diirran oo biyo ah. Substrate for beerto waxaa loo diyaariyey isku dar ah humus ama compost ciid. Waxaad kaloo iibsan kartaa substrate gaar ah dukaanka. Dhulku wuxuu ku kala firirsan yahay dheriyo yar yar, miraha waxaa lagu dhajiyaa iyaga, iyagoo qoto dheereynaya 2-3 cm. Waa suurad wacan in lagu daboolo dheriga filimka si loo abuuro saameynta qashinka yar-yar. Duulinta hawadu waxay noqonaysaa hal mar maalintii.
Wixii koritaanka geedo waa lagama maarmaan si loo hubiyo heerkulka hawada heerkul ah 20-23 ° C. Sida ugu dhakhsaha badan ee sprouts muuqaalka dhulka, filimka waa in laga saaro.
Si aad u beerto geedo dhul furan, waa inaad doorataa aagga iftiin leh, laakiin mid ka mid ah had iyo jeer maaha mar walba qorraxda qoraxda. Xaaladaha ugu fiican ee kobcintooda waa iftiin iftiin leh ama hooskii qayb ahaan.
Beerto waxaa la sameeyaa marka ciidda kululaato heerkul ah 14-15 ° C.
Substrate for beerto waxay u baahan yihiin si ay u qaataan dabacsan, nafaqo leh. Waa inay gudbaan hawada iyo qoyaanka si fiican. Geedo waxaa lagu dhejiyaa godadka soo degaya iyada oo la adeegsanayo habka isdhaafsiga.
Taageerada waxaa looga baahan yahay dhaqankaan. Waxaa fiican in laga beero derbiyada, deyrka, gaaska, ama in la dhiso qalab ku habboon ee looxaayo caleemaha.
Sidoo kale akhri beerista dhirta qalaad ee guriga: arysema, callistemon, cofie, hymenocallis, feijoa, luffa, strelitzia, rummaanka, calamondin, sinadenium, pawpaw.
Warshadu waxay jecel yihiin waraabinta joogtada ah ee caadiga ah - hal mar 7-12 maalmood. Xilliga xagaaga - ka sii badan, laakiin maaha ka hor inta aan la diirin. Xilliga qaboobaha, tirada iyo mugga waraabinta ayaa loo baahan yahay in la yareeyo. Qalitaanka jilitaanka dhulka waa mid aan loo baahnayn.
Marka ay aad u qalalan tahay dibadda, waxaa lagula talinayaa in lagu buufiyo biyaha la dejiyey.
Dharka labiska iyo diyaarinta jiilaalka
Laba sano ee ugu horreeya ee quudinta dhirta looma baahna. Waxay heli doontaa dhammaan walxaha lagama maarmaanka ah ee carrada nafaqo leh. Mustaqbalka, guga, waxaa lagama maarmaan ah in mulch 5-10 cm kula lakabka ah humus ama compost. Sannad ka dib, waxaad bilaabi kartaa quudinta "Kemira" (30-40 g halkii baadiyaha).
Tan iyo geedka waa perennial, ka dibna xilliga qaboobaha waxaa loo baahan doonaa in la gooyaa ee xididka, tegaayo 3-5 cm kor ku-dhulka, iyo xididdada waa in si fiican u diiray leh caleemo, caleemo qalalan, iyo peat. In kasta oo xaqiiqda ah in ay tahay mid aad u qabow u adkaysata, heerkulka jiilaalka ka hooseeya -15 ° C kuma adkeysan doono gynostemma. Guga, waxay dib u sii deynaysaa caleemaha.
Sidoo kale, dhirta waxaa loo wareejin karaa jiilaalka dheriga oo lagu meeleeyay aqalka dhirta lagu koriyo ama xaaladaha qolka.
Waa muhiim! Haddii dhirta ay ku koraan guriga, waxtarkeeda daaweyntu waa yar tahay. Qadarka ugu weyn ee walxaha qiimaha leh waxaa ku jira geed canab ah oo sii kordhaya ee dhulka furan.
Halista ugu weyn ee gynostemma, sida wakiilka bocorka, waa caarada caarada iyo caarada. Caarada caarada iyo caarada qoyan Cagaarka caleemaha iyo iyaga oo daboolaya iyo sprouts leh caaro kabaan si cad u xaqiijiya in ay saxdo sumcada. Haddii wakhtigu uusan bilaabmin daaweynta, dhirta waa la lumin karaa. Maadaama bukaan-dejiyahan uu ku dhaco xaaladaha hawada oo qalalan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo marar badan xagaaga. Sidoo kale mid ka mid ah hababka looga hortagi karo waa in laga saaro caws, goosashada dayrta ee haraaga dhirta qalalan iyo beeraha. Daaweyn adigoo isticmaalaya faleebo faleebo ah diirka basasha (200 g 10 litir). Iyada oo daaweyn habraac ah oo firfircooni ah oo ku salaysan chloroethanol.
Soo ogow noocyada caarada caarada waxyeello dhirta, sida loola dhaqmo caarada caarada iyo hababka daawada dadka.
Iyada oo la jabiyo aphids, caleemaha waxaa lagu dabooli doonaa dhibco, curl, iyo hoose ee iyaga ka mid ah kooxo cayayaanka waxyeello ayaa laga heli doonaa. Cabbiraadda badan ee aphids waxay u baahan tahay buufin "Karbofos."
Cudurada gynostemma waxay saameyn kartaa:
Bakteeriyada - waxay muujineysaa dhibco bunni ah caleemaha. Ka hortag iyo daaweyntu waxay ku jiraan daawaynta maadada bakteerokloride ama Bordeaux.
Caleemaha cad - ubaxyada cad waxay u muuqdaan caleemaha, caleemaha, xididdada. Goobaha ay saameysay ee dhirta ayaa laga saaraa, goobaha la gooyey waxaa lagu rusheeyaa dhuxul la jajabiyey ama ay suuxaan leh sulfate copper.
Calaamadaha dhaawaca dhirta cuduradan
Root caleemaha - sifooyinka dabeecadda: xajinta of xididada iyo afkoda, dhibaatooyinka nidaamka xididka. Si looga hortago cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro haramaha, burburka dhirta, codsan quudinta foliar.
Macmacaanka macaanka - waxaa lagu muujiyay weerar madow oo cad oo caleemo ah. Iyadoo qaybin xoog leh ayaa caawimeysa daaweynta keruubka kollofoolka, siyaadada fosfate.
Waa muhiim! Haddii aad qorsheyneyso inaad gynostemma u isticmaasho daawooyinka, waxaa lagama maarmaan ah in laga hortago faddaraynta cudurada iyo dulin, maaddaama ka dib markii daaweynta cagaarshowga ayan suurtagal ahayn in la isticmaalo.
Warshad ayaa ka baxda ujeedooyinka daawooyinka goosashada xagaaga. Waxaa la gooyaa oo la qalajiyaa hoosteeda ama meel la dego oo aan qorraxdu si toos ah u dhicin. Muddo laba toddobaad ah, alaabta ceeriineed waxay u baahan doontaa in si gooni gooni ah loogu daro.
Kadib qalajinta, caleemaha waa in lagu keydiyaa bacaha dabeecadaha dabiiciga ah ama weelasha dhalada. Caleemaha qallalan waxay hayn doonaan guryaha bogsashada 12 bilood. Ginosthem shan-caleen waa warshad gaar ah. Dhanka kale, waxay leedahay guryaha qurxinta iyo waxaa loo adeegsadaa in lagu qurxiyo meelaha iyo sida warshad aqalka ah oo lagu koriyo. Dhinaca kale, guryaha dawooyinka waxaa lagu caddeeyay sida lid ku ah lipid, antioxidant, tonic iyo tonic. Isla mar ahaantaana, waxaa lagu kori karaa beerta ama goob joog ah, iyada oo aan loo baahnayn daryeel gaar ah.